आइतबार दश अंकले घटेको शेयर बजार सोमबार बढ्ला कि घट्ला !:: Artha Dabali
आइतबार दश अंकले घटेको शेयर बजार सोमबार बढ्ला कि घट्ला !
काठमाडौं / लगातार ओरालो लाग्दै आएको धितोपत्र बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आइतबार पनि ओरालो लाग्यो । हिजो आइतबार नेप्से १० दशमलव ०१ अङ्कले घटेर एक हजार २५४ दशमलव ३५ बिन्दुमा ओर्लिएको हो ।
गत साताको कारोबारको अन्तिम दिन अर्थात बिहिबार परिसूचक करीब ६ अङ्कले वृद्धि भएपछि लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएका थिए ।
असार मसान्त लागेकाले बजारमा तरलता सहज हुने भएकाले बजार बढ्ने अनुमान समेत लगानीकर्ताहरुले गरेका थिए ।
गत साताको आइतवार र विहिवारको तुलनामा नेप्से परिसूचक ६ दशमलव शून्य ९ अंकले बढे बढेपछि लगानीकर्ताहरुले अब बजार केहि माथि जान सक्ने अनुमान गरेका थिए ।
अनुमान विपरित साताको पहिलो दिन आइताबार नेप्से परिसूचक घटेको हो । आइतबार ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २ दशमलव ०१ अङ्कले घटी २६९ दशमलव ६० बिन्दुमा पुगेको थियो ।
नेप्से परिसूचक ओरालो लागेसँगै कारोवार रकमसमेत घटेको थियो । आइतबार कूल १७२ कम्पनीको १५ लाख ७५ हजार ३४० कित्ता शेयर रु ४८ करोड १८ लाख ५९ हजार कित्ता शेयर खरीद–बिक्री भएको नेप्सेको विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार भएका कूल ११ उपसमूहमध्ये तीन उप–समूहको शेयर वृद्धि भएको थियो भने आठ उप–समूहको शेयर घटेको हो ।
विकास बैंक १ दशमलव ५१, वित्त शून्य दशमलव ०४ र सामूहिक लगानी कोष शून्य दशमलव ०३ अङ्कले बढेको थियो । यस्तै बैंकिङ ६ दशमलव ९२, होटल १४ दशमलव ६८, जलविद्युत् १३ दशमलव ३३, जीवन बीमा ८५ दशमलव २७, उत्पादन २९ दशमलव १, अन्य ७ दशमलव ९६, लघुवित्त १५ दशमलव ०५ र जीवन बीमा ७३ दशमलव ८८ अङ्कले घटेको थियो ।
स्टकका अनुसार आइतबार कारोवारका आधारमा लक्ष्मी बैंक शीर्ष स्थानमा थियो । सो बैंकको रु चार करोड १० लाख एक हजार ३७५ मूल्यमा शेयर खरीद बिक्री भए ।
यस्तै डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था रु दुई करोड ३२ लाख ७७ हजार, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी रु दुई करोड २८ लाख ६३ हजार, सिभिल बैंकको संस्थापक शेयर रु दुई करोड २३ लाख ८५ हजार, नेपाल बैंक रु दुई करोड २३ लाख ३७ हजार र नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैंकको संस्थापक शेयर रु एक करोड ९७ लाख १० हजार बराबरको कारोवार भई शीर्ष स्थानमा रहेको थियो ।
आइतबार घटेको बजारमा गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले ९ दशमलव ९३ प्रतिशतले कमाए । त्यस्तै गणपति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था ९ दशमलव ८२, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंक ८ दशमलव ५९, नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था ४ दशमलव ९८, मितेरी डेभलपमेण्ट बैंक २ दशमलव ७८ र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले १ दशमलव ९७ प्रतिशतले कमाए ।
आज साताको सोमबारको कारोबार भने बजार खुलेपछि मात्रै थाहा हुने नेप्सेले जनाएको छ । अघिल्लो सातामा पाँच दिन कारोबार भएको थियो । बजार लगातार घटिरहँदा लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेर को अवस्थामा रहेका थिए । जसको फलस्वरुपः कारोबार रकम घट्न पुगेको थियो ।